Izindaba - IZouping Mingxing Chemical isiqhubekela phambili endaweni yamakhemikhali edijithali
Ulayini wokukhiqiza osetshenziswayo phambi kwethu ulayini wokukhiqiza ohlakaniphile owenziwe ngcono futhi waguqulwa yiZouping Mingxing Chemical Co, Ltd. ngokutshalwa kwemali ngama-yuan ayizigidi eziyi-100 kulo nyaka. Njengamanje, imikhiqizo yamakhemikhali ifakwe ekukhiqizeni ngamaqoqo. Ngokusho komphathi jikelele wenkampani, "esivivinyweni esikhulu" sesifo esiwumqedazwe, inkampani iphumelele "ukuthatha ukuhlolwa" ithembele emisha yezobuchwepheshe, futhi ulayini wokukhiqiza ohlakaniphile nawo ulethe imibono emisha yokuthuthukiswa kwamabhizinisi. Kulo nyaka, inkampani izogxila ekwakhiweni kwemikhiqizo emisha enokuqukethwe kobuchwepheshe obuphakeme nenani eliphakeme elengeziwe, futhi izame ukwakha isisekelo sokukhiqiza esisezingeni eliphakeme nelokuqala emhlabeni jikelele.
Ukuthintwa yisimo sobhadane, akulula ukufeza inhloso enjalo, kepha abaholi benkampani bagcwele ukuzethemba: "ngokuholwa ubuhlakani bezimboni, ukusheshisa uguquko nokwenza ngcono, futhi kukhuthazwe ukuguqulwa kwenkampani kusuka kwesiko umkhiqizo ekukhiqizweni okwenziwe ngenani eliphakeme. ”
Ngaphezu kokusheshisa ukuguqulwa kolayini omkhulu, iZouping Mingxing Chemical Co, Ltd. nayo isheshisa imashi yayo ebheke endaweni yamakhemikhali edijithali. Ihlela ukubona ukusebenza okukhaliphile kwemishini kusuka ekubetheni kwempahla eluhlaza kanye nesisindo sokuthwebula komkhiqizo, ukustaka kanye nokutholwa kwesici. "Ngale ndlela, isibalo sabasebenzi abasetshenzisiwe sincishiswe ngama-32%, kepha ukusebenza kahle komhlangano wokusebenzela kuphindwe kabili.".
Uma sifuna ukunqoba imakethe yasekhaya, kufanele siphume siye ezweni. Njengamanje, iZouping Mingxing Chemical Co., Ltd. isheshisa ukweqa kusuka "ekukhiqizeni okugxile ekukhiqizeni" kuya "ekukhiqizeni okugxilwe kusevisi", kuqhubeka nokusebenzisa izinzuzo zayo zokwehlukanisa nokwandisa isabelo sayo semakethe. Kwikota yokuqala yalo nyaka, kukhiqizwe isamba semali eyizigidi ezingama-30 zamadola aseMelika ngemali yakwamanye amazwe evela emazweni angaphandle, kukhuphuke unyaka nonyaka ngama-30%. Sizolwela ukuthola imali eyizigidi eziyi-100 zamadola aseMelika ngokuthekelisa emazweni angaphandle unyaka wonke.